Zimbabwe is located in southern Africa which is a region insub-saharan Africa. It is a land locked country just north of SouthAfrica, and also surrounded by Mozambique, Zambia… and Botswana. ( Full Answer )
Zimbabwe was colonised in 1969 during the "Summer of Love " by Boyz II Men. However, the popular RnB group soon grew weary of the mundane duties required to run a country and …so in 1980 sold the fledgling nation to Robert Mugabe for a nickel, a Grammy and horse named Shoe. ( Full Answer )
The name Zimbabwe means a house built from stones, split into two "zimba" means house and "bwe" is stone. The name relates to the Great Zimabwe "Ruins" which were built by lay…ing stones on each other hence the name "House of stones" ( Full Answer )